खाना खानसाथ बज्रासनमा बस्दा के फाइदा हुन्छ ?
फेसन / सौन्दर्य
१७ साउन, काठमाडौं । खाना हाम्रो शरीरको लागि एक अनिवार्य आवश्यक्ता । कस्तो खाना खान्छौं, कसरी खान्छौं, कहाँ र कुन बेला खान्छौं भन्ने कुराले निकै महत्व राख्छ । किनभने स्वस्थ्य जीवनका लागि राम्रो एवं पोषिलो खानेकुरा मात्र भएर पुग्दैन । खाना कसरी पकाएको हो त्यसले पनि अर्थ राख्छ । खानामा रहेको पोषक तत्वलाई नष्ट नहुने गरी पकाएको खाना स्वस्थ्यकर मानिन्छ । यद्यपि यी खानाबाट त्यसबेला मात्र हामीले स्वस्थ्य लाभ लिनसक्छौं, जब सही ढंगले खाइन्छ । सही समय र सही आसन अपनाइन्छ ।
हाम्रा पूर्खाहरुले खानपानका सम्बन्धमा यावत् विधी एवं तौर–तरिकाहरु पहिल्याएका छन् । खाना खानुअघि के गर्ने, खाना खाइरहँदा कसरी खाने, खानपानपछि के गर्ने भन्ने कुरामा स्पष्ट दिशानिर्देश दिएका छन् ।
खाना खानुअघि पानी पिउनु उचित मानिदैन । खाना खाइरहँदा आनन्दपूर्वक स्वाद लिएर र विस्तारै खानुपर्छ । कुनैपनि ठोस खानेकुरालाई मुखमा नै चपाएर तरल बनाइसकेपछि मात्र निल्नुपर्छ भनिएको छ । यसैगरी खाना खाइसकेपछि पनि के गर्ने वा के नगर्ने भनी सुझाइएको छ ।
खाना खाइसकेपछि गह्रौ काम गर्नु, हिँडडुल गर्नु, शौचालय जानु राम्रो मानिदैन । अतः खाना खाए लगत्तै केही समयका लागि बज्रासनमा बस्नुपर्ने सुझाइएको छ । बज्रासन एकदमै सरल एवं सहज आसन हो । यो आसन जो कोहीले सजिलै अनुसरण गर्न सक्छन् ।
बज्रासन बस्दा खाएको खानेकुरा पेटमा सहज रुपमा पच्न सक्छ । यसले गर्दा शरीरमा अतिरिक्त बोसो जम्ने वा अपच जस्ता समस्या हुँदैन ।
खासमा बज्रासनको अर्थ बलवान स्थिती हो । यो योग पाचनशक्ति, वीर्यशक्ति तथा स्नायुशक्तिका लागि उपयोगी हुन्छ । यो आसन खाना खाएको पाँच मिनेट पछाडि बस्न सकिन्छ । बज्रासन दश देखि पन्ध्र मिनेटसम्म बस्नु उपयुक्त हुन्छ । त्यसो त अन्य समयमा पनि बज्रासन बस्दा फाइदा पुग्छ ।
कसरी गर्ने ?
– जमिनमा गुन्द्री वा म्याट ओछ्याएर बस्ने ।
– अब दुबै खुट्टालाई घुँडासम्म मोडेर खुट्टाको बलमा बस्ने ।
– तपाईंको दुबै खुट्टाको औला एकआपसमा मिलाउनुपर्छ ।
– कम्मरलाई एकदम सिधा राख्ने ।
– आफ्नो दुबै हातलाई घुँडाको माथि राख्ने ।
पाचन शक्ति राम्रो हुन्छ । यसल योगले पाचन यन्त्रलाई बलियो बनाउँछ । ग्यास, एसिडिटी, अपच सम्बन्धि पेटको रोग हटाउँछ ।
रक्त प्रवाह बढाउनमा पनि सहयोग गर्छ । मुटुसँग सम्बन्धित रोग नियन्त्रण गर्छ । यसले अतिरिक्त बोसो जम्न नदिने भएकाले मोटोपन बढ्दैन । मासंपेशी र हड्डी बलियो बनाउँछ । आँखाको ज्योति बढाउँछ । एकाग्रता बढाउँछ ।खाना खानुअघि पानी पिउनु उचित मानिदैन । खाना खाइरहँदा आनन्दपूर्वक स्वाद लिएर र विस्तारै खानुपर्छ । कुनैपनि ठोस खानेकुरालाई मुखमा नै चपाएर तरल बनाइसकेपछि मात्र निल्नुपर्छ भनिएको छ । यसैगरी खाना खाइसकेपछि पनि के गर्ने वा के नगर्ने भनी सुझाइएको छ ।
अनलाइन खबरबाट साभार
एकीकृत समाजवादीको पदाधिकारी चयन
अमेरिकाले ५० करोड डोज कोरोना खोप दिइने
आजबाट सोह्र श्राद्ध सुरु
1. एकीकृत समाजवादीको पदाधिकारी चयन
2. अमेरिकाले ५० करोड डोज कोरोना खोप दिइने
3. आजबाट सोह्र श्राद्ध सुरु
4. बैंकहरूले ब्याजदर बढाए
5. असोज १० गतेदेखि अग्रिम टिकट बुकिङ खुलाइने
1. लैड्गिक समता र लैड्गिक समानता भनेको के हो ?
2. नुवाकोटको तादी गाउँपालिका निवासी विजय कट्टेल मृत अवस्थामा फेला
3. श्रीमानको साथ र राजनैतिक यात्रा नै मेरो सफलताको बाटो हो : विन्दु पुडासैनी सिंखडा
4. जीवन के हो ? प्रतिभाशाली साहित्यकार झमक घिमिरे बाट सिक्नै पर्ने पाठ……(भिडियोसहित)
5. महिला हिंसा भनेको के हो ?
२ दिन पहिले
बैंकहरूले ब्याजदर बढाए
५ दिन पहिले
लैड्गिक समता र लैड्गिक समानता भनेको के हो ?
३ वर्ष पहिले
नुवाकोटको तादी गाउँपालिका निवासी विजय कट्टेल मृत अवस्थामा फेला
२ वर्ष पहिले
कोशिस मल्टिमेडिया प्रा. लि.
सम्पर्क : 01 4991472
Email : info@narikosis.com
ठेगना : काठमाडौं, नेपाल
सूचना विभाग दर्ता नम्बर: ११२७/ ०७५ -७६
महिलाहरुलाई लक्षित गरी महिलाको विषयवस्तु सम्बन्धित म्यागेजिनको संख्या न्यून रहेको अवस्थामा नारी कोशिसको परिकल्पना गरिएको हो । महिलाका विविध आयामलार्ई समेट्दै महिलाका विषयवस्तुमा केन्द्रित सामाग्रीहरुलाई यसमा प्रमुख स्थान दिइने छ ।
© Copyright 2018 कोशिस मल्टिमेडिया प्रा. लि.
Website By Dipen K.c